Paul's Letter to Titus – 2azụ
Home / Bible / Akwukwo ozi / Paul's Letter to Titus
1:1 Paul, otu ohu Chineke na onyeozi nke Jizọs Kraịst, na dị ka okwukwe ndi Chineke hoputara ma na nkweta nke eziokwu nke na-esonyere piety,
1:2 na olileanya nke ndụ ebighi ebi na Chineke, onye na-adịghị na-edina, kwere ná nkwa tupu afọ oge,
1:3 nke, n'oge kwesịrị ekwesị, o gosipụtara n'Okwu ya, na-ekwusa ozi ahụ e nyere m site n'iwu nke Chineke Onye Nzọpụta anyị;
1:4 Taịtọs, edima eyen dị ka ndị nkịtị okwukwe. Grace na udo, n'aka Chineke bụ Nna na site Christ Jesus Onye Nzọpụta anyị.
1:5 N'ihi nke a, M hapụrụ gị n'azụ na Krit: nke mere na ihe ndị ahụ na-adịghị, ị ga-eme, na nke mere na ị ga-ichi ndị, ofụri obodo, -nchu-àjà, (dị nnọọ ka m na-nyere gị)
1:6 ma ọ bụrụ na onye dị otú ahụ bụ na-enweghị iwe, ndị di nke otu nwunye, -enwe ntụkwasị obi umu, ọ bụghị ebubo na n'imeju ọchịchọ onwe, ma ọ bụ nke insubordination.
1:7 Na a bishop, dị ka a na-elekọta ụlọ Chineke, ga-enweghị iwe: adịghị okomoko, adịghị mkpụmkpụ n'obi, ọ bụghị onye aṅụrụma, ọ bụghị ime ihe ike, ọ bụghị achọ merụrụ emerụ uru,
1:8 ma kama: ele ọbịa, ụdị, na anya doro, dị nnọọ, nsọ, ọcha,
1:9 amakụ kwesịrị ntụkwasị obi okwu nke bụ na nkwekọrịta ozizi, ka o wee nwee ike ume na ụda ozizi na-arụ ụka megide ndị na-emegide.
1:10 For there are, n'ezie, many who are disobedient, who speak empty words, and who deceive, especially those who are of the circumcision.
1:12 A certain one of these, a prophet of their own kind, kwuru: “The Cretans are ever liars, evil beasts, lazy gluttons.”
1:13 This testimony is true. N'ihi nke a, rebuke them sharply, so that they may be sound in the faith,
1:16 They claim that they know God. Ma, by their own works, they deny him, since they are abominable, and unbelieving, and reprobate, toward every good work.
2:1 Ma unu gaje ikwu ihe kwesịrị ụda ozizi.
2:2 Jụọkwa ndị agadi kwesịrị inwe anya udo, ọcha, akọ, ada ke mbuọtidem, n'ịhụnanya, na ndidi.
2:3 agadi nwaanyị na-, N'otu aka ahụ, A ga-etinye nsọ attire, ọ bụghị ebubo ụgha, eweghi ya nye ọtụtụ wine, na-ezi nke ọma,
2:4 nke mere na ha kụziekwara akọ eme ka ụmụ agbọghọ, ka ha we ịhụ di ha n'anya, ịhụ ụmụ ha n'anya,
2:5 ezi uche eme, ọcha, gbochiri, nwere nchegbu maka ezinụlọ, enwe obiọma, subordinate na di ha: nke mere na Okwu Chineke nwere ike ghara ikwulu.
2:6 Ume-okorọbia n'otu aka ahụ,, ka ha we gosi njide onwe onye.
2:7 N'ihe niile, chee onwe gị dị ka ihe atụ nke ezi ọrụ: na ozizi, na-eguzosi ike n'ezi, kpọrọ ihe,
2:8 na ụda okwu, irreproachably, nke mere na ọ bụ onye iro nwere ike na-atụ ụjọ na ọ nwere ihe ọ bụla ihe ọjọọ ka ọ na-ekwu banyere anyị.
2:11 N'ihi amara nke Chineke bụ Onye Nzọpụta anyị apụtawo ìhè nye mmadụ niile,
2:12 gwara anyị ka anyị jụ enweghị nsọpụrụ na ọchịchọ nke ụwa, ka anyị wee na-ebi soberly na ihe ziri ezi nakwa piously n'oge a,
2:13 -atụ anya ihe nāgara nke olileanya na biakwa obibia nke ebube nke Chineke ukwu ahụ nakwa nke Onye Nzọpụta anyị Jizọs Kraịst.
2:14 O nyere onwe ya maka anyị n'ihi, nke mere na o wee napụta anyị n'aka ndị niile ajọ omume, na ike sachaara onwe ya na-anara nke ndị mmadụ, -achụ nke ezi ọrụ.
3:1 Adụ ha ọdụ ka ha na-ebutere ka na-achị achị na ndị ọchịchị, irube isi ha dictates, na-akwadebe maka ezi ọrụ ọ bụla,
3:2 na-ekwu okwu ọjọọ banyere onye ọ bụla, ghara litigious, ma na-edebere, na-egosipụta ihe niile dị umeala n'obi n'ebe mmadụ nile nọ.
3:3 N'ihi na, n'oge gara aga, anyị onwe anyị bụ ndị na-amaghị, na-ekweghị ekwe, na-agahie agahie, orù nke dị iche iche na ọchịchọ na ihe ụtọ, eme na echiche ojoo na ekworo, ịbụ mkpọrọmasị ma kpọọ onye ọzọ.
3:4 Ma mgbe ahụ, obiọma na ndi mmadu nke Chineke Onye Nzọpụta anyị pụtara.
3:5 Na ọ zọpụtara anyị, ọ bụghị n'ihi ọrụ nke ikpe ziri ezi na anyị mere, ma, -eme ihe o ebere, site na saa imu na site na ntaghari ohuru nke Mmụọ Nsọ,
3:6 onye ọ wụsara anyị n'ụba, site na Jizọs Kraịst Onye Nzọpụta anyị,
3:7 ka ọ were, ọ na e n'onye ezi omume site n'amara ya, anyị pụrụ ịghọ ndị nketa dị ka olileanya nke ndụ ebighị ebi.